Inona ny atao hoe API, REST, SOAP, XML, JSON, WSDL ary ny famaritana hafa
Midika inona ny API? Ary fanekena hafa: REST, savony, XML, JSON, WSDL
Alakamisy, Septambra 24, 2015 Zoma, Desambra 8, 2017 Douglas Karr
Rehefa mampiasa browser ianao dia manaova fangatahana amin'ny mpizara mpanjifa ny mpizara anao ary mandefa rakitra izay miangona sy mampiseho pejy web misy azy ny mpizara anao. Ahoana anefa raha tianao hiresaka amin'ny mpizara hafa fotsiny ny mpizara anao? Izany dia mitaky anao hanao programa kaody amin'ny API.
Inona no API mijoro?
API dia fanafohezana ny Fampivoarana amin'ny fandaharana fampiharana. An API dia andiana fahazarana, kaody ary fitaovana ampiasaina hananganana rindranasa miorina amin'ny tranokala sy finday. The API mamaritra ny fomba ahafahanao manamarina (tsy voatery), mangataka ary mandray angona avy amin'ny API mpizara.
Inona ny API?
Rehefa ampiasaina amin'ny sehatry ny fampandrosoana web, an API dia mazàna napetraka voafaritra amin'ny hafatra fangatahana Hypertext Transfer Protocol (HTTP), miaraka amin'ny famaritana ny firafitry ny hafatra valiny. Ny API API dia mamela ny fampifangaroana serivisy marobe ho fampiharana vaovao fantatra amin'ny hoe mashups.Wikipedia
Famaritana horonan-tsary momba ny ataon'ny API
Misy protokolola lehibe roa rehefa mamorona API. Ireo fiteny fampiasa amin'ny fomba fanao toa an'i Microsoft .NET sy Java developer matetika dia maniry ny SOAP fa ny protokol malaza indrindra dia ny REST. Tahaka ny fanoratanao adiresy ao anaty tranokala ahazoanao valiny, ny kaody nataonao dia mandefa fangatahana amin'ny API - lalana ara-bakiteny eo amin'ny mpizara izay manamarina sy mamaly araka ny tokony ho izy ireo angona angatahinao. Ny valiny momba ny SOAP dia mamaly amin'ny XML, izay mitovy be amin'ny HTML - ilay kaody fampiasan'ny browser-nao.
Raha te-hitsapa API ianao nefa tsy manoratra tsipika kaody, DHC manana lehibe Fampiharana Chrome amin'ny fifandraisana amin'ny API sy ny fahitana ny valinteniny.
Inona no dikan'ny Acronym SDK?
SDK dia fanafohezana ny Kit ny mpamorona rindrambaiko.
Rehefa mamoaka ny API misy azy ireo ny orinasa iray dia misy antonta-taratasy miaraka aminy izay mampiseho ny fomba API manamarina, ahoana ny fomba anontaniana azy, ary inona ny valiny mety. Mba hanampiana ireo mpamorona hanomboka voalohany, matetika ny orinasa dia mamoaka a Kit ny mpamorona rindrambaiko hampiditra kilasy na ireo fiasa ilaina ho mora amina tetikasa izay soratan'ilay mpamorona.
Inona no dikan'ny Acronym XML?
XML dia fanafohezana ny Fiteny fanamarihana eXtensible. Ny XML dia fiteny fanamarihana ampiasaina handefasana angon-drakitra amin'ny endrika izay vakina amin'ny olombelona sy vakina amin'ny masinina.
Ity misy ohatra iray amin'ny fisehoan'ny XML:
<?xml Malagasy Bible ="1.0"?>
Ny vokatra voalohany
Inona no dikan'ny Acronym JSON?
Ity misy ohatra iray amin'ireo angona etsy ambony izay mampiasa JSON:
"Title": "Vokatra A",
"Famaritana": "Ny vokatra voalohany",
Inona no dikan'ny Acronym REST?
REST dia fanafohezana ny Famindrana ny fanjakana Representational fomba fanaingoana ho an'ny rafitra hypermedia nozaraina. Izany dia nomen'i Roy Thomas Fielding
Whew… fofonaina lalina! Azonao atao ny mamaky manontolo disertation eto, nantsoina hoe Architectural Styles sy ny Design des Architectures momba ny rindrambaiko miorina amin'ny tambajotra natolotra tamin'ny fahafaham-po amin'ny ampahany ny fepetra takiana ho an'ny diplaoma DOCTOR OF PHILOSOPHY momba ny informatika sy ny informatika avy amin'i Roy Thomas Fielding.
Misaotra Dr. Fielding! Vakio bebe kokoa momba HAFA ao amin'ny Wikipedia.
Midika inona ny Acronym SOAP?
Ny SOAP dia fanafohezana ny Fivarotana tsotra Access Access
Tsy programmer aho, fa raha ny fahitako azy, ireo developer izay tia ny SOAP dia manao izany satria afaka mamorona kaody mora foana izy ireo amin'ny interface programme mahazatra izay mamaky ny rakitra Web Definition Service (WSDL). Tsy mila mamaky ny valiny izy ireo, efa vita tamin'ny fampiasana WSDL. Ny SOAP dia mitaky valopy misy programa, izay mamaritra ny firafitry ny hafatra sy ny fomba fanodinana azy, andiam-pitsipika enti-milaza ny famoahana ny tranga datatypes voafaritra ho an'ny fampiharana ary fivoriambe iray hisolo tena ny antso sy valiny.
Amplero: fomba mahomby kokoa hampihenana ny mpanjifa
Inona avy ireo singa tokony hosedrainao amin'ny fampielezana mailakao?
9 Feb 2017 tamin'ny 2:35 maraina
Misaotra amin'ireo fanazavana fototra ireo.
Sep 26, 2017 amin'ny 11: 33 AM
Tena tsara izany misaotra tompoko amin'ity vaovao ity.
6 Desambra 2017 à 1:13
Mankasitraka anao nandefa ity vaovao ity aho - nanontany tena aho hoe inona no dikan'ny REST nandritra ny fotoana ela! 🙂
13 Desambra 2020 à 6:44
Farany (farany!) famintinana fohy momba ny dikan'ireo fanafohezan-teny mampatahotra rehetra ireo. Misaotra anao mampiasa fiteny mazava sy mivantana, vokatra = ho avy izay toa mamiratra kely ho an'ity mpamorona mpianatra ity.
14 Desambra 2020 à 3:40
Salama Vic, eny… manaiky aho. Mampatahotra ny teny. Tsaroako ny fotoana voalohany nanomana fangatahana API iray ary nikitika daholo izany ary tsy nino aho hoe mora tokoa izany. Misaotra!